Salesforce Integrated msdị na Formstack | Martech Zone
Na Tọzdee, Septemba 8, 2009 Mọnde, Jenụwarị 1, 2018 Douglas Karr
Y’oburu n’inwebata ihe na Salesforce API, imara ka o siri sie ike… mana odighi adi nfe ya. Web-To-Leads na Web-To-Ndi ana-akpo esighi ike, mana ka na-achọ ka ị jiri aka gị zụlite ụdị weebụ gị. Kudos to Mpempe akwụkwọ maka ntọhapụ ha kachasị ọhụrụ, nke na-enye Mgbakwunye Salesforce dị mfe!
Tags: formsmpempe akwụkwọformstack mwekotandị ahịaụdị ahịasalesforce mwekota
Sep 9, 2009 na 1:39 PM
Daalụ Doug! Obi dị anyị ụtọ na anyị mechara kwadebe ma bido ya.